Intee le’eg tahay saamaynta tallaalka COVID-19 ku yeelan karo qofka? | Dhacdo
Home Wararka Maanta Intee le’eg tahay saamaynta tallaalka COVID-19 ku yeelan karo qofka?
Iyadoo xanuunsidaha COVID-19 uu si weyn ugu faafayo dunida ayaa waxaa haddana jira dad fara-badan oo diidan in ay qaataan tallaalka loogu talagalay fayriska Corona.
Dr. Cismaan Cali Gaboose oo ka hawlgala Isbitaalka Kenyatta ee Magaalada Nairobi, waxna laga weydiiyay inay jiraan dad badan oo baqdin ka muujinaya in tallaalku uu waxyeelo u gaysanayo, haddii ay markaasi qaataan ayaa sheegay in maalin illaa laba cisho uu qofka xanuun dareemi karo, balse aanu dhibaato ku keeni doonin mustaqbalka.
“Marka dib loogu noqdo taariikhda tallaaladii horey dunida jiray dhammaantood, tallaal kasta wuxuu leeyahay wejiga 1aad qofka waxyaalo yar oo uu isu arki karo way jiraan, oo ay ka mid tahay meeshii laga mudaayay xanuunto, inuu qofka qandho yar dareemo, inay murquhu xanuunaan, inuu calaamadihii hargabka uu yara dareemo, astaamahaani dhammaantood waxay ku soo geba-gabeysmaan maalin illaa laba maalmood.” Ayuu yiri Dr. Cismaan Cali Gaboose oo la hadlay BBC.
Dr. Gaboose ayaa tilmaamay inaanu tallaalka u sameysnayn hab uu waxyeelo ugu gaysan karo qofka qaadanaya, xanuunka maalmaha hore uu qofka dareemayana uu yahay mid ka tarjumaya in jirka uu si fiican ula falgalay tallaalkaasi.
“Markaad eegto qaab dhismeedka loo sameeyay tallaalka, ma muuqato inay dhibaato weyn ka dhalan doonto mustaqbalka, laakiin waxyaalaha yar yaroo maalin illaa laba maalmood jiri kara waa wax muujinaya inuu tallaalku shaqaynayo, jirkuna si fiican ugu dhismoon garoobay. Wax weynoo qofka wax gaarsiin karayana maaha.” Ayuu yiri Dr. Gaboose.
Wadamada waaweyn ee dunida ayaa soo saaray illaa afar tallaal oo loogu talagalay in looga hortaggo COVID-19, inkastoo aanu jirin tallaal rasmi ah oo boqolkiiba boqol (100%) ah.
Previous articleLaba nin oo qaad waday oo lagu dilay Gobolka Galgaduud
Next articleHormuud oo 1,500 oo haamood (Oxygen) ku wareejisay Isbitaalka Martini